China YEJ2 akateedzana remagetsi akamedura matatu-chikamu asynchronous mota fekitori uye vanotengesa | Kutungamira
YXP dzino dzakakwirira-tembiricha moto-kurwisa chiutsi fa ...
YEJ2 akateedzana remagetsi akamedura matatu-danho asynch ...
Matatu-chikamu asynchronous mota yekukuya ibwe ...
IE3 akateedzana Ultra-yakanyanya kushanda matatu-chikamu asynchr ...
IE2 dzakateerana yakakwirira kunyatsoshanda matatu-danho asynchronous ...
YEJ2 dzakatevedzana remagetsi akamedura matatu-danho asynchronous injini
Aya akateedzana emota akashongedzerwa nemagetsi emagetsi paasina-kudhonza mugumo wemotokari. Kana mota ikarasikirwa nemagetsi, bhureki remabhureki remagetsi emagetsi rinotsikirirwa richitsikirira pakavha yekumberi kwemota kuti iite kupesana kwekubvongodza torque.
Misa mota, uye iyo isina-mutoro braking nguva inoitika kubva padiki kusvika kune huru, 0.15 ~ 0.45S. Aya akateedzana emamota anoshandiswa zvakanyanya mumakanika ekugadzirisa muchina maturusi uye kuendesa michina uye kurongedza, kuveza huni, chikafu, Machina emakemikari, machira, kuvaka, zvitoro, kutenderera masuo, nezvimwe zvinoshandiswa sekutyaira.
Method Brake nzira: simba kutadza akamedura
Nzira: Power Off Brake
Simba / Simba: 0.55 ~ 45kW
Nzira yekugadzirisa: Hafu-wave kugadzirisa
Nzira: Hafu-wave Kugadzirisazve
Iyo yekutengesa network yeLijiu Motor yakapararira kumatunhu anopfuura makumi maviri nemaguta anosanganisira Maodzanyemba, Kumadokero, Maodzanyemba, Central, Maodzanyemba, Maodzanyemba kwakadziva kumadokero neEast China. The zvigadzirwa vari aivigirwa kuna Europe, America, Southeast Asia uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
Lijiu Motor iri nyanzvi mukugadzira, R & D uye rokutengesa pamusoro dzakasiyana-siyana Motors. Zvigadzirwa zvinosanganisira YE2, YE3, YB3, kutonhodza shongwe motors, YD2, YEJ2, YVF2, YC / MC, YL uye mamwe akawanda akateedzana matatu-chikamu asynchronous motors uye mamwe akasiyana akakosha ma mota. Chigadzirwa chinotora iyo nyika yakabatana standard dhizaini, uye iro simba remagetsi uye saizi yekumisikidza inoenderana neInternational Electrotechnical Commission's IEC standard. Iine zvakanakira kugona kwakanyanya uye kuchengetedza simba, yakakwira yekutanga torque, yakaderera ruzha, yakadzika vibration uye yakakwirira kuvimbika. Izvo zvigadzirwa zvakapfuura European Union's CE chitupa uye China's CCC uye CQC certification. Iyo kambani yawana ISO9001 yepasi rose mhando system chitupa. Lijiu mota yakazvipira kupa mhinduro dzakanakisa kune vashandisi veindasitiri uye emagetsi, vachigadzira mota dzakakosha.
Pashure: YD2 akateedzana pole-achichinja akawanda-mhanyisa matatu-chikamu asynchronous mota
Zvadaro: YVP yakateedzana matatu-chikamu asynchronous motors eakasiyana frequency frequency kumhanya
YVP akateedzana matatu-chikamu asynchronous motors e ...
IE1 akateedzana matatu-chikamu asynchronous mota
Matatu-chikamu asynchronous mota yematombo grindi ...
IE2 dzakateedzana yakakwira kunyatsoshanda matatu-chikamu asynchro ...